Qaraxyo lala eegtay garoonka diyaaradaha magaalada Brussels
Mjournal – Wararka naga soo gaaraya dalka Belgium – ka ayaa sheegaya in labo qarax lagu weeraray garoonka diyaaradaha mgaalada Brussels. Qaraxyadan oo aan si dhab ah loo ogeyn waxa uu ahaa ayaa waxaa uu sababay in daaqadihii iyo muraayadihii garoonka uu soo daato....
Dowladdaha Mareykanka iyo Cuba oo wali khilaaf dhinaca aragtida ah uu ka dhax jiro
Mjournal :–Mareykanka iyo Cuba, ayaa Waxaa u dhexeeya Weli kala aragti-duwanaan dhanka fikirka ah, iyadoo tani ay dibadda u soo baxday, kaddib kulan dhexmaray madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama oo booqasho ku jooga Havana iyo madaxweynaha Cuba, Raul Castro. Qodobbada ay...
Madaxweyne Gaas” dagaalka Al-shabaab wali ma dhamaan
Mjournal :–Madaxweynaha maamul gobolleedka Puntland C/wali Max’ed Cali Gaas oo dib ugu laabtay maalintii shalay magaalada Garoowe, kadib safar uu muddo bil ku dhow uga dibada ugu maqnaa, ayaa ku baaqay in laga feejignaado weerarada Al-Shabaab ku soo qaadayaan...
Ra’iisal wasaare Sharm’arke oo ku baaqay in la caawiyo dadka ay abaaruhu ku dhufteen
Mjournal :–Ra’iisul wasaaraha xukuumada Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmarke, ayaa codsi u jeediyay beesha caalamka in ay gurmad u fidhiyaan dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen isagoo sheegay in xukuumadiisu qorsheynayso sidii loo caawin lahaa dadka dhibaateysan....
Mohammed Ahmed Othman Al Hammadi, UAE Ambassador to Somalia, has met with Michael Keating, Special Representative of the UN Secretary-General for Somalia, at the embassy headquarters in Mogadishu, to discuss relations between the UAE and the United Nations Office in Somalia. The...
70 Al-Shabaab militants killed in N. Somalia: official
At least 70 Al-Shabaab militants have been killed and 30 others captured in heavy fightings by Somalia’s Puntland forces in the past four days, officials said on Monday. Puntland Minister of Information Mohamud Hassan said their forces the fightings took place in Suuj...
Puntland oo soo bandhigtay meydadka iyo maxaabiis Al-shabaab ” Sawirro”
Mjournal :–Dawladda Puntland ayaa Maanta meel Togga Suuj & Garmaal u dhaxaysa kusoo bandhigtay Meydka 71 ka tirsan Argagixisada Kooxda Alshabaab & 31 Maxaabiis ah kuwaas oo ka tirsanaa Kooxda Alqaacida Gacansaarka la leh ee Alshabaab. Saraakiisha Hogaaminaysay...
Daawo Sawirrada booqashadii Barack Obama ee Jasiirada Cuba
Mjournal :–Madaxweynaha dalka Mareykanka Obama ayaa noqoday madaxweynihiin ugu horeeyay oo cagta dhiga Jaziirada Cuba kadib 90 sano. Booqashadan oo aheyd mid taariikhi ah ayaa madaxweynaha waxaa ku wehliyay qoyskiisa oo kala ah xaaskiisa Michelle, iyo labadiisa gabdhooda...
Ra’iisal wasaare Sharm’arke” Puntland uma baahna xiligan in la geeyo AMISOM
Mjournal :–Ra’iisal wasaaraha xukuumada Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharm’arke oo shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kadib safar uu ku tagay dalka Talyaaniga ayaa ka hadlay dagaalada u dhaxeeya Ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab. Ra’iisul Wasaare...
Xarrakada Al-shabaab oo sheegatay in ay 73 askari ku dileen weerar ay ku qaadeen Laata Buuro
Mjournal :–Saraakiisha Al-shabaab ayaa sheegtay in ay ay dilleen 73 askari ka tirsan ciidamada dowladda weerar culus oo xalay ku qaadeen xerada laanta Buuro, kadib markii dagaalyahanadeeda ay dhowr jiho ka weerareen. C/siis Abuu-Muscab oo ah afhayeen dhinaca howlgalada ee...
Madaxweyne Obama oo booqasho taariikhi ah ku tagay jasiirada Cuba
Mjournal :–Madaxweynaha Maraykanka, Barack Obama iyo Wafdi uu hogaaminayo oo ay ku jiraan xaaskiisa iyo labadiisa gabadhood ayaa gaaray Magaalada HAVANA ee xarunta wadanka Cuba, taasoo noqonaysa tii ugu horreysya oo Madaxweyne Mareykan ah uu ku jato Jasiiraddaas muddo ku...
Xarrakada Al-shabaab oo weerar culus ku qaaday deegaannka Laanta Buuro
Mjournal :–Xoogag ka tirsan xarrakada Al-shabaab ayaa xalay saqdii dhexe weerar culus ku qaaday Saldhig Ciidamada Milateriga Soomaaliya ku leeyihiin Xerada Laanta-Buuro, halkaasoo uu ka dhacay dagaal saacado badan qaatay. Sidda ay sheegeeen dadka deegaanka xarrakada...
Wararkii ugu danbeeyay dagaallada u dhaxeeya ciidammada Puntland iyo Al-shabaab
Mjournal :–Kaddib weeraro Al-shabaab ay ku qaadeen deegaanno ka tirsan Puntland xeebta Garacad iyo Garmaal oo ka kala tirsan Mudug iyo Nugaal ayaa wali waxaa xaalad aan deganeyn ka jirta deegaanadii maalmihii la soo dhaafay lagu dagaalamayay. Ciidamada Puntland ayaa dagaalo...
Dab qabsaday qeybta dawada isbitaalka Banaadir
Mjournal :–Waxaa dab khasaare geystay fiidnimadii caawa uu ka kacay qeybta keydka Daawada ee Isbitaalka Hooyada iyo dhalaanka Banaadir ee magaalada Muqdisho, iyadoo dabkan uu saameeyay bakhaaro ay ku keydsanaayeen daawooyinka. Agaasimaha waaxda dab damiska ee Gobolka...
Puntland oo sheegtay in ay Al-shabaab ka saartay togga Suuj
Mjournal :–Wasiirka Warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soo-Cadde ayaa sheegay inay ka saareen dagaalyahanadii Shabaabka ahaa ee ku sugnaa Togga Suuj, halkaasoo afartii maalmood ee la soo dhaafay uu dagaal adag ka socday. Wasiirka ayaa sheegay in ay gacanta ku hayaan...
Dowladda Soomaaliya iyo Shiinaha oo ka wadda -abaarta ka jirta qeybo ka mid ah dalka
Mjournal :–Ku-simaha RW Somalia, isla markaana ah ahna wasiirka Cadaaladda, C/laahi Axmed Jaamac [Ilka-Jiir], ayaa Maanta la kulmay Safiirka Shiinaha ee Somalia, Wei Hongtian oo Warsame Geel-jire loo yaqaano. Iyagoo kawada hadlay xoojinta xiriirka labada dalka iyo sidii...
Barack Obama oo booqasho taariikhi ah ku tagaya dalka Cuba
Mjournal :—Madaxweynaha Mareykanka Barack H. Obama oo ay la socdaan xubno ay ka mid yihiin; xaaskiisa iyo labadiisa gabadhood, ayaa ku tagaya maanta Cuba booqasho 48-saacadood qaadanaysa, iyadoo noqonaysa booqashadii ugu horeysay oo madaxweyne Mareykan ah uu ku tago...
Kenya oo sheegtay in ay Jubbada hoose ku dishay 21 dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab
Mjournal :–Saraakiisha dowladda Kenya ayaa sheegay in dagaalkii shalay ka dhacay inta u dhaxeysa Qooqaani iyo Afmadow looga dilay 2-askari, halka 5-askari looga dhaawacay. Afhayeen u hadlay militariga dalka Kenya ayaa sheegay in Al-Shabaab ka dileen 21 dagaalame, isla...
Dagaal culus oo ka soconaya dulleedka deegaanka Garacad ee gobolka Mudug
Mjournal :–Wararka nag soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegaya in wali dagaal culus uu ka soconayo dulleedka deegaanka Garacad, kaasoo u dhaxeeya ciidammada Puntland iyo xoogagga Al-shabaab. Sida ay wararku sheegayaan dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu geystay khasaare...
Madaxweyne Xassan Sheekh” waa in gargaar lala gaaro dadka ay abaartu saameysay
Mjournal :–Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Max;uud ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed, hay’adaha gargaarka iyo beesha caalamka inay kaalmo deg-deg ah la soo gaaraan dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen. “Biyo yaraan iyo abaaro baahsan ayaa goobo badan oo...